လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်တွင် နာမည်ကြီးနေသော (၄)နှစ်ကျော်သမီးလေးရဲ့ ဟစ်ကြွေးသံ…. – Cele Oscar
လူမှု့ကွန်ယက်ပေါ်တွင် နာမည်ကြီးနေသော (၄)နှစ်ကျော်သမီးလေးရဲ့ ဟစ်ကြွေးသံ….
March 22, 2021 By L YC Knowledge
စစ်တပ် နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲ့ အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်မှု တွေ တနေ့တခြား တိုးလာနေ ပေမယ့် နိုင်ငံ တဝန်းက ပြည်သူ တွေ ကလည်း အလျှော့ မပေးဘဲ ဆက် လက်ြ
ပီး စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြ နေကြတာပါ။
ရန်ကုန်မြို့ တနေရာက ဆန္ဒပြပွဲ မှာတော့ လေးနှစ်အ ရွယ် ကလေးငယ် တစ်ယောက်ဟာ စစ်အာဏာ ရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲ ကြွေးကြော်သံ တွေ ကို ဦးဆောင်တိုင်ပေးနေတာ ဗီဒီယိုမှာ တွေ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ စစ်အာဏာ သိမ်းလိုက်ချိန် ကစပြီး နိုင်ငံတဝန်း အလွှာ စုံက ပြည်သူတွေ ဆန္ဒပြနေကြတာ အခုဆိုရင် ၄၈ ရက်ရှိလာ ပြီဖြစ်ပါတယ်။
(၁၉၉၆) ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာ မွေးဖွားတဲ့ ဂျန်နရေးရှင်းဇီ လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးဆက် သစ်လူငယ် အများစုက စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေးမှာ ပိုတက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်နေကြသလို ဂျန်နရေးရှင်း အယ်လ်ဖာ လို့ခေါ်တဲ့ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းမွေးဖွားတဲ့ ကလေးငယ် တွေလည်း ဆန္ဒပြပွဲ တွေမှာ ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
စဈတပျ နဲ့ ရဲတပျဖှဲ့ ရဲ့ အကွမျးဖကျ ပဈခတျမှု တှေ တနတေ့ခွား တိုးလာနေ ပမေယျ့ နိုငျငံ တဝနျးက ပွညျသူ တှေ ကလညျး အလြှော့ မပေးဘဲ ဆကျ လကျပွီး စဈအာဏာရှငျကို ဆနျ့ကငျြ ဆန်ဒပွ နကွေတာပါ။
ရနျကုနျမွို့ တနရောက ဆန်ဒပွပှဲ မှာတော့ လေးနှဈအ ရှယျ ကလေးငယျ တဈယောကျဟာ စဈအာဏာ ရှငျဆနျ့ကငျြရေး ဆန်ဒပွပှဲ ကွှေးကွျောသံ တှေ ကို ဦးဆောငျတိုငျပေးနတော ဗီဒီယိုမှာ တှရေ့ပါတယျ။ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနေ့ စဈအာဏာ သိမျးလိုကျခြိနျ ကစပွီး နိုငျငံတဝနျး အလှာ စုံက ပွညျသူတှေ ဆန်ဒပွနကွေတာ အခုဆိုရငျ ၄၈ ရကျရှိလာ ပွီဖွဈပါတယျ။
(၁၉၉၆) ခုနှဈ နောကျပိုငျးမှာ မှေးဖှားတဲ့ ဂနျြနရေးရှငျးဇီ လို့ချေါတဲ့ မြိုးဆကျ သဈလူငယျ အမြားစုက စဈအာဏာရှငျ ဆနျ့ကငျြရေးမှာ ပိုတကျတကျကွှကွှ ပါဝငျနကွေသလို ဂနျြနရေးရှငျး အယျလျဖာ လို့ချေါတဲ့ ၂၀၁၀ နောကျပိုငျးမှေးဖှားတဲ့ ကလေးငယျ တှလေညျး ဆန်ဒပွပှဲ တှမှော ပါဝငျနတောတှရေ့ပါတယျ။
စစ်တပ်မိသားစု ဖြစ်ပေမယ့် မတရားတာကို သိလို့ လမ်းပေါ်ထွက် ခဲ့ရင်း ကျဆုံးသွားရတဲ့ ကိုသက်ပိုင်စိုး